Omenala Damdo Mbu Matra MED METRUPE | Rayson
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. Damro mmiri na-ahụ maka oke mmiri taa, Rayson na-ama elu dị ka onye na - eweta ọkachamara na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo ihe gbasara ngwaahịa ọhụrụ anyị Darro mmiri na ụlọ ọrụ anyị site na ịkpọtụrụ Rayson Days na-egosi nke ọma maka usoro ejiji, ogo, arụmọrụ, na uwe.